Fantsom-pifandraisana mora azo, fantsom-bozaka, fantsona indostrialy - Zebung
Hebei Zebung Rubber Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2003 ary miorina amin'ny faritra fampandrosoana Jing County, Provinsi Hebei, Sina. Tamin'ny 2015, ZEBUNG dia nanafatra setina 4 an'ny tsipika famokarana hosoka indostrialy VP Italiana, nampitombo ny famokarana hosoka solika an-dranomasina tsipika ho an'ny hose lehibe-savaivony. aorian'ny 17 taona mahery fampandrosoana haingana, ZEBUNG dia miasa ho toy ny orinasa mpitarika teknolojia. Ny renivola voasoratra anarana ZEBUNG dia nitombo hatramin'ny 59 tapitrisa, mpiasa mihoatra ny mpiasa 150, mpiasa mpikaroka siantifika 10, injeniera zokiny 3, maherin'ny 120 andiana fitaovana famokarana.
Ny vokatra rehetra dia nahazo BV ISO9001: 2015 fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena
Am-polony taona maro ny traikefa matihanina, haavon'ny endrika tsara!
Mampiasà fitantanana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001 2000 mandroso!
Izahay dia maharitra amin'ny kalitaon'ny vokatra ary mifehy tsara ny fizotran'ny famokarana, manolo-tena amin'ny fanamboarana karazana rehetra!